QM oo ka digtay xaalad nafaqa darro oo kusoo wajahan 1.25 Milyan oo Carruurta Soomaaliyeed ah – Radio Muqdisho
QM oo ka digtay xaalad nafaqa darro oo kusoo wajahan 1.25 Milyan oo Carruurta Soomaaliyeed ah
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabbilsan dhallaanka ee UNICEF ayaa ka digtay in Carruur kor u dhaafaysa 1.25 Milyan oo Soomaali ah ay halis ugu jiraan nafaqo-darro ba’an Sannadkan, sababto la xiriira fatahaadahii ka dhacay Soomaaliya.
Afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay oo lagu Magacaabo, Stephane Dujarric , oo Jimcihii Shalay saxaafadda siinayay warbixinta joogtada ah ee daadadka tan iyo Bishii April ee Sanadkan ayaa sheegay inay jirto halis nafaqa darro.
Waxa uu sidoo kale sheegay in hay’addu ay ogaatay in kala bar Caruurta ay da’doodu ka yar tahay Shan jir oo ah in ka badan 1,25 Milyan ay wajahayaan Sanadkan xaalad nafaqo darro, waxaana Dadkaasi ka mid ah, 232,000 Carruur ah oo ay hayso nafaqo-xumo ba’an, kuwaas oo u baahan daryeel gaar ah.
Goobihii ay ka dhaceen daadadka ayaa laga baqdin qabaa inay ka dillaacaan cudurrada halista ah sida Jadeecada, Shuban Biyoodka iyo Daacuunka , kuwaas oo meelaha qaarba laga helay kiisaskooda balse lala tacaalay.
Dowladda Soomaaliya ayaa hoggaaminaysa barnaamijka lagu gargaarayo Dadka ay waxyeellada kasoo gaadhay fatahaaddu, Waxanay Wasaaradda Caafimaadka geysay Dawo loogu tala galay in wax lagaga qabto Cudurrada ka dillaaca goobaha ay ka dhacaeen fatahaadda iyo daadadka.
Madaxa siyaasadda Midowga Yurub oo joojisay booqasho ay ku tegi lahayd Israa’iil
In kabadan 60 saraakiil Soomaali ah oo tababar ugu soo geba geboobow Dalka Turkiga+sawirro